Chelsea Oo Diyaar U Ah Iney Soo Iibsato Daafaca Kooxda Tottenham - Jubbaland TV
By admin April 29, 2018 246
Daafaca kooxda Tottenham Hotspur Toby Alderweireld ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u yahay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa ciyaaray kaliya hal kulan oo Premier League ah oo uu u ciyaaray Spurs tan iyo dhamaadkii bishii October inkastoo xaqiiqda ah inuu dhaawac muruqa ah soo gaaray xilli ciyaareedkii hore ee 2018ka.
Sida laga soo xigtay wargeyska The Sun, Alderweireld ayaa diidan inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda ka dhisan waqooyiga London, waxa uu ku biiray xiisaha Stamford Bridge.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Chelsea ay isku diyaarineyso dalab 45 milyan oo ginni ah oo lagu qiimeeyo daafaca dhexe, kaasoo hal xilli ciyaareed ka hartay Spurs.
Intaa waxaa dheer, wargeyska ayaa sheeganaya in Alderweireld uu heysto qandaraas 25 milyan ginni ah oo uu ku kacayo £ 14m haddii Spurs ay ka faa’ideysato hal sanno oo qandaraas kordhin ah dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, isagoo kooxda ka tagaya xilli adag hadii uu isku dayo inuu qiime u yeesho hore.
Tababaraha Lilywhite Mauricio Pochettino ayaa la aaminsan yahay inuu diyaar u yahay xilli ciyaareed kasta, waxaana uu udhaliyay Ajax da ‘
Alderweireld ayaa 106 kulan u saftay Tottenham tan iyo markii uu ka soo tagay kooxda Atletico Madrid sanadkii 2015.
The post Chelsea Oo Diyaar U Ah Iney Soo Iibsato Daafaca Kooxda Tottenham appeared first on Wararka Ciyaaraha.
hido iyo hala abuur
Klopp oo baadi goobaya sedex goolhaye midkood in xili ciyaareedkan uu la soo saxiixdo
Hazard ayaa wali sugaya u dhaqaaqista Real Madrid